चुनौतीको घेरावन्दीमा शेरबहादुर | Nagarik News - Nepal Republic Media
चुनौतीको घेरावन्दीमा शेरबहादुर
१३ पुस २०७३ १५ मिनेट पाठ
नेपाली कांग्रेसको सत्तरी वर्षको जीवनकालमा सर्वाधिक आन्तरिक संगठनात्मक अकर्मण्यताले निम्त्याएको चुनौतीको सामना गर्दैछन् वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा। उनी आफ्नै अकर्मण्यताको घेराबन्दीमा परेका छन् र त्यसबाट निस्कने कुनै संकेत दृष्टिगोचर हुँदैन। आरम्भदेखि कोइरालाहरुको निर्णायक नेतृत्वको शृंखला टुटाउन समर्थ रहेका देउवाको करिव एक वर्षे कार्यकालको महत्वपूर्ण र सकारात्मक समीक्षा हुने कुनै आधार छैन । पोखराका कांग्रेस नेता पोषनाथ शर्माले प्रसंगवस भने– सात दशकको जीवनमा नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक सभापतिले निर्णायक काम गरेका छन् । मातृकाप्रसाद कोइराला अधिनायक भएर २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति गरेपछि सुवर्णशमशेरले २०१५ सालको चुनाव गराएका घटना कांग्रेसको इतिहासमा अंकित छन् । सभापतिका रूपमा बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले सहमति वा असहमति जे भए पनि उनीहरुले आफूलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण काम गरेका छन् । बिपी कोइरालाले निर्दलीय निरंकुश सत्ताविरुद्ध गरेको संघर्षको कथा आउने पुस्ताका लागि रोमाञ्चकारी लाग्नेछ ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईले निर्दलीय सत्ता अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका साथ आमनिर्वाचनसमेत गराएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भएको समयमा राजसंस्था अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको मार्ग प्रशस्त भएको थियो भने सुशील कोइरालाका समयमा जस्तो भए पनि सविधान सभाले पहिलो पटक संविधान जारी गरेको थियो । आजका परिवर्तनको इतिहास अध्ययन गर्ने जुनसुकै कालखण्डमा जसकसैले पनि यस सत्य अस्वीकार गर्न सक्देैन । राजनीतिक वैरभाव र पूर्वाग्रह राख्नेहरुको फरक धार र धारणा हुनसक्छ जुन अन्यथा होइन । यद्यपि सभापतिहरु एक्लैले आफ्नो ऐतिहासिकता पूरा गरेका भन्ने होइन । उनीहरुका साथमा अनेक त्यागी नेता, कार्यकर्ता र विभिन्न समुदायका व्यक्तित्वको सहयोग थियो । राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तरर्राष्ट्रिय भूमिका पनि परिवर्तनका कारण भएका थिए । तर मूलरूपमा नेपाली कांग्रेसका नेताको भूमिका महत्वपूर्ण देखिँदै सभापतिहरुको स्थान ऐतिहासिक बनेको छ । तर अहिलेका सभापति देउवाको कस्तो ऐतिहासिक भूमिका हुने हो ? यो प्रश्न पोषनाथ शर्मा जस्ता नेपाली कांग्रेसका खारिएका नेताहरुको हो । यसको उत्तर देउवाले दिने कि नदिने ? यदि नदिने हो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अब अवसानोन्मुख छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर शब्दमा होइन, कर्ममा हुनु आवश्यक छ । शब्दमा ओठे जवाफ दिन सजिलो छ । देशभर छरिएका सदस्यलाई केही छिन् हँसाउन, तर्कले लटरपटर पार्न वा उनीहरुको अवैकल्पिक बाध्यताको फाइदा उठाउनमात्र केही शब्द खर्च गर्नु सजिलो छ । तर कामले उत्तर दिने सामथ्र्य राख्नु आवश्यक छ । शब्दको सामथ्र्यको कुनै अर्थ हुँदैन यस्तो वेला ।
देउवा सभापति भएपछि तीनवटा आन्तरिक काम सम्पन्न भए । लामो समयदेखि थाँती रहेको र अघिल्लो नेतृत्वले गर्न नसकेको मूल भातृसंस्थाहरुको महाधिवेशन र निर्वाचनको काम देउवा नेतृत्वले आरुढ भएको छ महिना पूरा नहँुदै सम्पन्न गरेको छ । नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाल विद्यार्थी संघ र त्यसपछि नेपाल महिला संघ हँुदै नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन आफैँमा एक विशेष उपलब्धि हुनसक्छ । तैपनि तरुण दलले पूर्णता पाएको छैन । अपूरो संगठनले उद्देश्य प्ूारा गर्नु सम्भव हुँदैन । यसै पनि भातृसंस्थाहरुको महाधिवेशन नियमित काम हो । पार्टीको महाधिवेशन जस्तै गरी पार्टीका भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको पनि महाधिवेशन, निर्वाचन र नयाँ नेतृत्व चयन अनिवार्य काम हो। त्यस्तो अनिवार्य काम गर्नु कुनै बहादुरी मानिँदैन।
करिव एक वर्षको यस अवधिमा एक वर्षअघि सुशील कोइरालाको ढिपीका कारण गुमेको शासनसत्तामा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता भएको छ । कोइरालाको त्यो ढिपीले एकप्रकारले साम्यवादीहरुलाई गोलबद्ध हुने अवसर प्रदान गरेको थियो र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति हुने अवसरसमेत गुमाउन पुगेको थियो । नेपालमा अहिले पनि साम्यवादीहरुको राजनीतिक बहुमत विद्यमान छ । साना÷ठूला साम्यवादी दलहरु एक ठाउँ उभिन पुगे भने नेपाली कांग्रेस जहिले पनि अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । यसै कारण सत्ताको साम्यवादी ब्यूह तोड्नु जरुरी थियो । जुन काम एमाले माओवादी सहकार्य भंग नगरेसम्म सम्भव थिएन । एमाले नेतृत्वको सरकार अपदस्त गरेपछि नेपाली कांग्रेसका लागि हुने फाइदा योभन्दा बढी केही पनि छैन । तर अहिले पनि नेपाली कांग्रेस सत्तामा निर्णायक छैन । एमाले नेतृत्वमा सामेल हुन अस्वीकार गर्ने नेपाली कांग्रेस अन्ततः माओवादी नेतृत्वको सहयोगी हुनुको कुनै अर्को अर्थ देखिँदैन । तराई मधेससँग अड्किएको समस्याको निकासका लागि एमालेसँगको सहकार्य पनि बाधक हुने थिएन । संविधान जति पल्ट संशोधन गरे पनि एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा सम्भव थियो । माओवादीको नेतृत्वसँग सहकार्य गर्दा समस्या अड्काउने बाटोमात्र फराक भएको छ। तराई मधेसकेन्द्रित दलहरुले समेत साथ दिन चाहेका छैनन्।
एमालेले विरोधमा आफूलाई खडा गर्नासाथ तराई मधेसकेन्द्रित दलहरुको बार्गेनिङ क्षमता ह्वात्तै बढेको छ । हुन त प्रकारान्तरले हेर्दा उपयोग गर्ने कला भएमा तराई मधेसकेन्द्रित दलहरुसंँगको संवादमा एमाले विरोध अभियान सत्ता पक्षका लागि प्रभावशाली ऊर्जा सिद्ध हुनसक्छ । एमालेले यतिखेर संविधान कार्यान्वयनका लागि दिइरहेको नारालाई सत्ताले कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने सामथ्र्य देखायो भने त्यो सत्ताको हितमा हुनेछ । अहिलेका सत्तासीनहरुले २०४८ मा किसुनजीको नेतृत्वका कामहरुको अध्ययन गर्नु जरुरी छ । संविधानमा दुइटा मूल प्रश्न उठेका थिए त्यस समय । सक्रिय राजाका पक्षधरहरु सार्वभौम सत्ता राजामा रहनुपर्छ भन्थे भने साम्यवादी र अन्य केही जातिवादीहरु धर्म निरपेक्षताको माग गरिरहेका थिए । तर किसुनजी यस विवादमा पर्नासाथ संविधान बनाउन सकिनेमा शंकित हुनुहुन्थ्यो । उहाँले राजावादीहरुलाई हिन्दु धर्म रोज्ने कि सार्वभौम सत्ता भन्ने प्रश्न गरेपछि राजावादीहरु हिन्दु राष्ट्रमा सहमत भए । साम्यवादीहरुसँग किसुनजीको प्रश्न थियो– जनतामा सार्वभौम सत्ता लिने कि राजामा राख्ने ? राजामा राख्ने हो भने धर्म निरपेक्षता हुनसक्छ । अन्तिममा साम्यवादीहरु पनि धर्मसापेक्ष राष्ट्रमा सहमत भए । अर्थात् कुशल कूटनीतिको परिणाम २०४७ मा धर्मसापेक्ष जनतामा सार्वभौम सत्ता रहने गरी संविधान जारी भयो र आमनिर्वाचनसमेत भयो । यदि धर्म सापेक्ष र सार्वभौमसत्ता कसमा निहीत हुने भन्ने विषयमा बहस भएको भए ठीक समयमा संविधान आउने थिएन । निर्वाचन हुनु त कता हो कता ? अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै दिने र लिनेको हुनसक्छ । सूक्ष्मपूर्वक केलाउन सक्नुपर्छ । तर त्यसरी केलाउने काम कम्तीमा पनि नेपाली कांग्रेसमा भएको देखिँदैन । सभापति देउवा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रका कुन मुद्दामा कति जनाले कतिपटक सभापति देउवासँग छलफल गरे ? देउवा स्वयंले कतिपटक त्यस्तो विचारविमर्श गरे? नियुक्ति माग्ने र काम बनाइदिन आग्रह गर्नेहरुको कर्म भीडमा विमर्श हुन सक्दैन।
नेपाली कांग्रेसमा उपसभापतिको वैधानिक व्यवस्था छ । तर महाधिवेशन भएर एघार महिना पूरा हुँदासमेत उपसभापति नियुक्त गरिएको छैन । विभाग गठन भएका छैनन्। केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको मनोनयन भएको छैन । सदस्यहरुलाई परिचालन गर्न स्थान परिपूरण गरिनुपर्छ। कार्यकालको अन्तिम दिनमा स्थान परिपूरण गर्नुको कुनै औचित्य हँुदैन । अनेक केन्द्रीय नेताहरु यतिखेर नेपाली कांग्रेसमा भूमिकाबिहीन भएका छन् । उनीहरु भूमिका नपाएर निष्क्रिय जस्ता छन्। सदस्यहरु भनेका पार्टीका औजार हुन् । औजार थन्काएर राख्दा स्वाभाविकरूपमा खिया लाग्छ। औजारमा खिया लाग्न नदिन निरन्तर धार लगाइरहनुपर्छ । सदस्य परिचालन गर्नु र जिम्मेवारी दिनुको अर्थ नै धार लगाउनु हो । कांग्रेसमा परिचालित नभएका सदस्य विस्तारै खिया लाग्दै जान लागेका छन् र नेपाली कांग्रेस भुत्ते खुकुरी जस्तो हँुदैछ ।
यसै पनि नेपाली कांग्रेस प्रशिक्षणबिहीन भुत्ते खुकुरी भएकै छ । उपसभापतिको नेतृत्वमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनेको भए पनि विगतमा यो तत्कालीन उपसभापतिको चुनाव प्रचार गर्ने र समूह विस्तार गर्ने संयन्त्र बनेको थियो । नेपाल जस्तो लोकतन्त्रबारे अल्पज्ञान भएको र प्रयोगमा अत्यन्त पछाडि परेको देशका नागरिकमा पार्टीले लिने आदर्श, सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीतिमाथि त्यति चासो हँुदैन । हावा कता र कसले कसरी बहाउँछ त्यतै कुद्ने बानी विकास भएको हुन्छ । तर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउने हो भने आदर्श, सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । प्रशिक्षणले नै आमसदस्य र जनसमुदायमा सही जानकारी पुग्छ । शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व लिएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना विगतका गल्ती सच्याउने छ र संगठनको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। हिजो आफैँले नेतृत्वविरुद्ध लगाएका आरोप र देखाएका समस्याबाट नेपाली कांग्रेसलाई मुक्त गराउने क्षमता देउवाले देखाउने छन् भन्ने कुरा विस्तार अपत्यारिलो हँुदैछ । देउवा असफल हुनु वा आलसी हुनुको पीडा वर्तमानले र वर्तमान पुस्ताले भोग्नुपर्दैन होला तर आउने पुस्ता जो लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा समर्पित हुन व्यग्र छ त्यसले अनावश्यकरूपमा यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।
प्रकाशित: १३ पुस २०७३ ०९:०१ बुधबार